मेला – Page3– Pahilo Page
Monday February 24, 2020 |
बाह्रकुने दहको माघे संक्रान्ति मेलामा आउँदै हट डान्सर मेघना
काठमाडौं, २६ पुस । प्रत्येक वर्षको माघे संक्रान्तिमा लाग्दै आएको बाह्रकुने दहमा हुने साङ्गीतिक कार्यक्रममा यसपालि मेघना मगर आउँदै छिन् । अहिलेकी चर्चित र हट डान्सर मेघनाले यसपालि बाह्रकुने दहको मेला तताउने भएकी छन् । माघे संक्रान्तिको अवसरमा लाग्ने बाह्रकुने मेलामा पछिल्लो समय राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरु आएर आफ्नो...
यसरी हुँदैछ नेपाल आइस विन्दास म्युजिक अवार्ड २०७६
काठमाडौं, २३ पुस । यस वर्ष ‘नेपाल आइस बिन्दास म्युजिक अवार्ड २०७६’ धनगढीमा हुने भएको छ । आयोजकले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार उक्त कार्यक्रममा विभिन्न २२ विधामा अवार्ड वितरण गरिने छ । कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी हेर्नुहोस् ः १) कार्यक्रमको शिर्षक :– नेपाल आईस विन्दास म्युजिक अवार्ड २०७६ २) कार्यक्रम संचालन हुने...
विवाहित तर सुन्दरी हुनुहुन्छ ? खुल्यो ‘मिसेस व्यूटी क्वीन नेपाल २०१८’ को आवेदन
काठमाडौं, २४ मंसिर । सुन्दरी हुनुहुन्छ ? सुन्दरी भएर पनि विवाह भइसकेकाले सुन्दरी प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुन पाउनु भएको छैन ? अब चिन्ता नगर्नुस् । यदि तपाईं सुन्दरी हुनुहुन्छ भने विवाहित महिलाहरुका लागि ‘मिसेस ब्यूटी क्वीन नेपाल २०१८’को आवेदन खुलेको छ । मिस इकलेज, जुनियर स्कूल प्रिन्सेस, मिस एयर होस्टेस, एसएलसी प्रि...
काठमाडौं, १९ मंसिर । नवीन कला मन्दिरको ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंसिर २१ गते शुक्रवार कमलपोखरी, काठमाडौस्थित रसियन कल्चर सेन्टरमा दिउँसो १ बजेदेखि नवीन कला सम्मान एवं साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । सो कार्यक्रममा चर्चित गीतकार रत्न शमशेर थापा, चर्चित लोक गायिका ज्ञानु राणा, नाट्य अभिनेत्री शकुन्तला शर्मा लगायत क...
सागर अधिकारीलाई कसले लठ्ठै बनायो ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १८ मंसिर । डा. डीआर उपाध्यायको शब्द तथा सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर, सङ्गीत रहेको निकै राम्रो गीत ‘लट्ठै बनायो‘’ सार्वजनिक भएको छ । साहस शाक्यको सङ्गीत संयोजन रहेको गीतको भिडियो डीआर म्युजिक युट्यु मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सुनिल क्षेत्रीको निर्देशनमा रहेको गीतको भिडियोमा सुनिल आफैँ र अलिशा शर्मा फिचरिङ छ...
छैठौं पृथ्वी राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्डका उत्कृष्ट पाँच छनौट
काठमाडौं १८ मङ्सिर । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, उपत्यका समन्वय समिति काठमाडौंले पत्रकार समेलन गरी अवार्डको बारेमा छलफल गरेको छ । ‘‘अग्रजलाई सम्मान नयाँलाई प्रोत्साहन’’ मूल नारासहित समितिले ‘‘छैठौं पृथ्वी राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्डका लागि उत्कृष्ट पाँच छनौट गरी पत्रकारहरुसँग छलफल गरेको हो । विगत ५...
मिस वल्र्डका लागि श्रृङ्खला खतिवडालाई भोट गर्ने समय थप
काठमाडौं, १४ मंसिर । मिस वल्र्डमा ‘हेड टु हेड च्यालेन्ज’ का लागि भोट गर्ने अवधि दुई दिन थप भएको छ । यसअघि २८ नोभेम्बरसम्म भनिएकोमा अब ३० नोभेम्बरसम्म भोट गर्न पाइनेछ । भोटिङमा अहिलेसम्म नेपालकी श्रृङ्खला खतिवडा अग्रस्थानमा छिन् । मल्टिमिडिया अवार्ड र हेड टु हेड च्यालेन्जका लागि पब्लिक भोट आवश्यक हुन्छ । मल्टिमिडि...
मेघना मगरको सेक्सी फोटोले ततायो यसरी नेपाली बजार
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपाली मिडियामा मेघना मगर भनेर नचिन्ने शायद कमै होलान् । मोडलिङ र नृत्यमा आफ्नो पौरखले दर्शकको मन जित्न सफल भएकी मगर समुदायमा जन्मेहुर्केकी मेघना मगरले बेलाबेला अति नै हट फोटो सुट दिएर चर्चामा आउने गरेकी छन् । वेल डान्स एकेडेमी स्थापना गरेर नृत्यको विकासमा जुटेकी कलाकार हुन् मेघना । उनको मोडल...
आउँछु म फर्केर भन्दाभन्दै नआएपछि यो जोडीको यस्तो कहालीलाग्दो खबर
काठमाडौं, ४ मंसिर । रोजगारीको सिलसिलामा लाखौं नेपालीहरु विदेश जाने र मृत्युको मुखमा पुग्ने हाम्रो नियति नै बनेको छ । धन आर्जनका लागि जोखिमयुक्त कामहरुमा लाग्ने र नेपालीले आफ्ना सारा सपनाहरु मृत्युको मुखमा बुझाउने अनगिन्ती श्रृंखलाहरुलाई गायक जीवन थापा मगरले आफ्नो गीतमा समेटेका छन् । ‘आउँछु म फर्केर’ बोलको गीतमा ...
सल्यानमा सोरठी नाच ब्युँझाउने प्रयास
सल्यान, २ मंसिर । लोप हुने अवस्थामा पुगेको सोरठी नाच संरक्षणमा सल्यानमा पहल थालिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले मौलिक कला संस्कृती संरक्षणमा चासो देखाएपछि सोरठी नाचको कला भएकाहरु व्युँझने कोसिस गरेका छन् । युवा पुस्ता पनि सोरठी सिक्ने प्रयासमा छन् । पुरुषले महिलाको भेषमा नाच्ने कलात्मक सोरठी नाच सल्यान जिल्लाको पहिचान ...
८० देशका खानेपानी मन्त्रीका सामु यसो गर्दैछिन् मन्त्री बिना मगर
मालिका : छोरीहरुका लागि रेखाले कोरेको रङ्गीन बाटो
दाङमा बस दुर्घटना हुँदा १४ जनाभन्दा बढी घाइते